? => NaOH (sodium hydroxide) | Isku-dheelitirnaanta isla'egta Kiimikada
? = NAAO | Isu dheellitirka Kiimikada
? = sodium hydroxide
Natiijooyinka 88 helay
Muujinta isleeg ka 66 ilaa 70 Bogga 14 - Fadlan U Gudub Dhamaadka Si Aad U Aragto Natiijooyin Badan
4H2O + NABH4 → 4H2 + NaOH + B (OH)3
biyaha borohydride sodium hydrogen sodium hydroxide
(nóng) (kh) (kt)
4 1 4 1 1 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 4H2O + NABH4 H 4H2 + NaOH + B (OH)3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee H2O (biyaha) ee NaBH4 (sodium borohydride)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa H2 (hydrogen) iyo NaOH (sodium hydroxide) iyo B (OH) 3 ()?
Dhacdada ka dib H2O (biyaha) waxay la falgalaan NaBH4 (sodium borohydride)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga B (OH) 3, oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda NaBH4 (sodium borohydride), oo la waayo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 4H2O + NABH4 H 4H2 + NaOH + B (OH)3
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta NaBH4 (sodium borohydride)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaBH4 (sodium borohydride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaBH4 (sodium borohydride) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee H2 (sodium borohydride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh H2 (hydrogen) alaab ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta NaOH (sodium hydroxide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaOH (sodium borohydride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaOH (sodium hydroxide) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta B(OH)3 ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee B(OH)3 (sodium borohydride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh B(OH)3 () badeecad ahaan?
6NH4OH + Na3[AlF6] → Al (OH)3 + 3NaOH + 6NH4F
ammonium hydroxide Sodium hexafluoroaluminate aluminium hydroxide sodium hydroxide Amooniyam fluoride
(đậm đặc) (kt)
6 1 1 3 6 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 6NH4OH + Na3[AlF6] → Al(OH)3 + 3NaOH + 6NH4F
Waa maxay xaaladda falcelinta ee NH4OH (ammonium hydroxide) waxay kaga falcelisaa Na3[AlF6] (Sodium hexafluoroaluminate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa oo u soo saari kartaa Al (OH) 3 (aluminium hydroxide) iyo NaOH (sodium hydroxide) iyo NH4F (Ammonium fluoride)?
Dhacdada ka dib NH4OH (ammonium hydroxide) waxay la falgashaa Na3[AlF6] (Sodium hexafluoroaluminate)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga NH4F (Ammonium fluoride), oo soo muuqanaya dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda Na3 [AlF6] (Sodium hexafluoroaluminate), oo la waayo
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 6NH4OH + Na3[AlF6] → Al(OH)3 + 3NaOH + 6NH4F
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta Na3[AlF6] (Sodium hexafluoroaluminate)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Na3[AlF6] (Sodium hexafluoroaluminate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na3[AlF6] (Sodium hexafluoroaluminate) falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Al (OH) 3 (aluminium hydroxide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee Al(OH)3 (Sodium hexafluoroaluminate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Al (OH) 3 (aluminium hydroxide) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaOH (Sodium hexafluoroaluminate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaOH (sodium hydroxide) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta NH4F (Ammonium fluoride)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NH4F (Sodium hexafluoroaluminate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NH4F (Ammonium fluoride) alaab ahaan?
NaHCO3 + Ba (OH)2 → H2O + NaOH + BaCO3
bicarbonate sodium barium hydroxide biyaha sodium hydroxide kaarboon kaarboon
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta NaHCO3 + Ba (OH)2 → H2O + NaOH + BaCO3
Waa maxay xaalada falcelinta ee NaHCO3 (sodium bicarbonate) ay kaga falceliso Ba(OH)2 (barium hydroxide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa H2O (biyaha) iyo NaOH (sodium hydroxide) iyo BaCO3 (barium carbonate)?
Dhacdada ka dib NaHCO3 (sodium bicarbonate) waxay la falgashaa Ba (OH) 2 (barium hydroxide)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga BaCO3 (barium carbonate), oo soo muuqanaya dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada NaHCO3 + Ba (OH)2 → H2O + NaOH + BaCO3
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta NaHCO3 (sodium bicarbonate)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaHCO3 (sodium bicarbonate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaHCO3 (sodium bicarbonate) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaOH (barium hydroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaOH (sodium hydroxide) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha badeecada BaCO3 (barium carbonate)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee BaCO3 (barium hydroxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh BaCO3 (barium carbonate) alaab ahaan?
N2O + 2NAH2 → NaOH + NH3 + NA3
sodium amide; Aminosodium; Sodioamine sodium hydroxide ammonia Sodium azide; Azidosodium; Garaac; Sunta; Benzide
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta N2O + 2NAH2 → NaOH + NH3 + NA3
Waa maxay xaalada falcelinta ee N2O () ay kaga falceliso NaNH2 (Sodium amide; Aminosodium; Sodioamine)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa NaOH (sodium hydroxide) iyo NH3 (ammonia) iyo NaN3 (Sodium azide; Azidosodium; Smite; Noxide; Benzide)?
Dhacdada ka dib N2O () waxay la falgashaa NaNH2 (Sodium amide; Aminosodium; Sodioamine)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga NaN3 (Sodium azide; Azidosodium; Smite; Noxide; Benzide), oo ka muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda NH2 (Sodium amide; Aminosodium; Sodioamine), waa la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada N2O + 2NAH2 → NaOH + NH3 + NA3
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta N2O ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee N2O ()? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee N2O () falcelin ahaan u ah?
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta NaNH2 (Sodium amide; Aminosodium; Sodioamine)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaNH2 (Sodium amide; Aminosodium; Sodioamine)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaNH2 (Sodium amide; Aminosodium; Sodioamine) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaOH (Sodium amide; Aminosodium; Sodioamine)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaOH (sodium hydroxide) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NH3 (Sodium amide; Aminosodium, Sodioamine)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NH3 (ammonia) alaab ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta NaN3 (Sodium azide; Azidosodium; Smite; Noxide, Benzide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaN3 (Sodium amide; Aminosodium; Sodioamine)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaN3 (Sodium azide; Azidosodium; Smite; Noxide; Benzide) badeecad ahaan?
2HNO2 + 2N.N3 → 3N2 + 2NaOH + 2MAYA
acid nitric Sodium azide; Azidosodium; Garaac; Sunta; Benzide nitrogen sodium hydroxide nitrogen monoxide
2 2 3 2 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2HNO2 + 2N.N3 → 3N2 + 2NaOH + 2MAYA
Waa maxay xaaladda falcelinta ee HNO2 (nitrous acid) waxay la falgashaa NaN3 (Sodium azide; Azidosodium; Smite; Noxide, Benzide)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa N2 (nitrojiin) iyo NaOH (sodium hydroxide) iyo NO (nitrogen monoxide)?
Dhacdada ka dib HNO2 (nitrous acid) waxay la falgashaa NaN3 (Sodium azide; Azidosodium; Smite; Noxide; Benzide)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga MAYA (nitrogen monoxide), oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Ama haddii mid ka mid ah walxaha fal-celinta soo socda NaN3 (Sodium azide; Azidosodium; Smite; Noxide; Benzide), waa la waayey
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2HNO2 + 2N.N3 → 3N2 + 2NaOH + 2MAYA
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta HNO2 (nitrous acid)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee HNO2 (nitrous acid)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh HNO2 (nitrous acid) ka falcelin ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha falcelinta NaN3 (Sodium azide; Azidosodium; Smite; Noxide; Benzide)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaN3 (Sodium azide; Azidosodium; Smite, Noxide, Benzide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaN3 (Sodium azide; Azidosodium; Smite; Noxide; Benzide) falcelin ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee N2 (Sodium azide; Azidosodium; Smite, Noxide, Benzide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh N2 (nitrogen) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikada iyo jireed ee NaOH (Sodium azide; Azidosodium; Smite, Noxide, Benzide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh NaOH (sodium hydroxide) badeecad ahaan?
Su'aalaha la xidhiidha alaabta NO (nitrogen monoxide)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee NO (Sodium azide; Azidosodium; Smite, Noxide, Benzide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh MAYA (nitrogen monoxide) badeecad ahaan?
Muujinta isleeg ka 66 ilaa 70 Page 14